Kite Beach, Wollongong Beach - Dubai
Adreesị: Umm Suqeim, dị nnọọ na Jumeirah Beach Road, dị nso Jumeirah Beach Hotel - Dubai - United Arab Emirates
Ekwentị: +971 4 317 3999
Osimiri kachasị mma nke Dubai dị na ebe mara mma nke Jumeirah, bụ ebe ndị obodo kachasị ọnụ ahịa obodo ahụ dị. Ọ bụ 11 kilomita nke kasị mma coastline, nke na-asọmpi na mma na osimiri nke Sydney , Los Angeles, Rio de Janeiro na paradaịs ọzọ paradaịs osimiri nke ụwa. Ma ọbụna n'etiti ndị mmadụ onwe ha na ndị ọbịa na-ezumike nka nwere osimiri dị iche iche nke ọha - dịka ọmụmaatụ, Kite Beach - nke na-enye ohere ịbanye n'oké osimiri maka onye nleta ọ bụla.
Nkọwa nke osimiri dị na Kite Beach
Na map nke Dubai, osimiri nke Kite Beach dị nso n'ógbè Jumeirah. Ọ bụ n'ókèala dị n'etiti otu ụgbọ mmiri na obere obodo nta. Na mbụ, a na-akpọ ebe a Wollongong Beach, ebe ọ bụ na osimiri dị na Mahadum Woollongong. Ozugbo ụmụ akwụkwọ ji esi nri ebe a ma gbaa ọkụ, mana emesia amachibidoro ya iwu.
Kite Beach bụ osimiri na-enweghị ụsọ mmiri na-enweghị ihe ọ bụla. Ụlọ ahịa ndị dị nso na ụlọ ahịa dị nso n'ebe dị anya na ebe obibi. Akpọrọ gị nri na mmiri ọṅụṅụ dị mkpa. E nwere mgbe ifufe siri ike. Kite Beach bụ ebe pụrụ iche na Dubai. A na-akpọkarị ya "osimiri nke anụ ọhịa," ọtụtụ ndị na-abịakarị bụ ndị na-eto eto na ụmụaka ndị na-agbazi ọrụ ndị a.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị banyere Kite Beach?
Dị ka aha ya na-egosi, ndị kitesurfers na-ezukọta ebe a. Mgbe ị bia n'ụsọ osimiri, ịnwere ike ile ha anya ma ọ bụ gbalịa iguzo na osisi n'onwe gị. N'akụkụ osimiri n'akụkụ okporo ụzọ, e nwere ọtụtụ ebe maka sọfụfụ, ebe ị nwere ike ịgbazite ngwá ọrụ ma ọ bụ nkuzi ole na ole site n'aka ndị nkụzi. Enwere ulo akwukwo mmiri. N'akụkụ osimiri ka e ji nwee ogige football, ihe mgbochi maka ụmụaka, ụgbụ nkwụ maka volleyball, e nwere ụlọ mposi na ịsa ahụ.
Dị ka ọtụtụ ụsọ osimiri ndị ọzọ, ebe ị nwere ike na-enweghị ihe mgbochi iji weputa foto na vidiyo. N'elu Kite Beach, enweghi ego, tinyere oge ufodu umunwanyi. Dị ka Jumeirah agbata obi, mmiri dị na Kite Beach dị ọcha ma dị ọcha, ọnụ ụzọ mmiri ahụ dị nro ma dị jụụ. Ị nwere ike igwu mmiri, sunbathe ma kpọọ ebe a n'afọ niile na gburugburu elekere. A na-akwụ ugbo mgbochi kacha nso.
Egwurugwu na-enye echiche magburu onwe ya banyere mbara igwe Burj Al Arab . Ọ bụ n'ụsọ osimiri a ka ndị isi obodo na-enwekarị ụbọchị ezumike ọha.
Kedu esi aga Kite Beach na Dubai?
N'elu osimiri ọ kachasị mfe ịbanye ebe a site na tagzi, ịgbazinye ma ọ bụ ịkwaga njem . Dị ka onye ndu, jigide ụlọ Ụlọ Ọrụ Ụwa. Ụlọ ọdụ ụgbọ oloko kachasị nso, Bank Noor, nwere ebe dị abụọ site na oké osimiri.
Sheikh Zaid Highway
Zoo na Dubai
Obodo Mba Ụwa
Ụlọ Elu nke Rose
Ebe e wusiri ike nke al-Fahidi
Strudel - ezigbo uzommeputa maka ule na mgbanwe dị iche iche nke nju
Pavlovskaya na-ekpuchi ajị anụ
Adele gosipụtara onwe ya na hypostasis na-atụghị anya ya na vidiyo ọhụrụ
Uwe na ụdị nke safari 2013
Nzube na New Year maka ego
Cameron Diaz mụrụ nwa?
Onyinye maka Afọ Ọhụrụ ka ụmụaka
Nkume artificial maka mma ime
Uwe ejiji Harley Quinn
Akpụ akpụkpọ ụkwụ na-adị ọcha
Omenala nke nwoke
Mkpụrụ obi na ime afọ ime
Esi esi esi nri nke akwukwo nri?
Puff Daddy gbanwere aha ya na Ịhụnanya
Hummus n'ụlọ - uzommeputa
Ngwá ọrụ ndị mmadụ maka nsí
Ụlọ ụlọ ụlọ
A na-ebo onye na-ewu ewu egwu ebubo
Salad na kabeeji na ọka